मानसिक बिरामीले किन गर्छ अपराध?
प्रकाशित मितिः श्रावण, 21, 2076
क. मानसिक समस्या भएका व्यक्तिले जानी/नजानी जघन्य अपराध गर्न सक्छन्ः
मानसिक बिरामीले कहिलेकाहीं ज्यानै मार्ने गरेको पनि पाइएको छ। खासगरी साइक्याट्रिक बिरामी (मेनिया, सिजोफ्रेनिया, गाँजा सेवन) ले जघन्य अपराध गरेको पाइन्छ। मानसिक बिरामीले यस्ता अपराध दुई कारणले गरेको पाइएको छ,
१. विशेष उद्देश्य प्राप्त गर्न
२. शंका लागेर
मानसिक रोगका बिरामीले पनि अन्य मानिस जस्तै राम्रा/नराम्रा सोचको पछाडि लागेर ज्यानै मार्ने अपराध गरेको पाइएको छ। गोरखाका एक जना मानसिक बिरामीले आफ्नै आमाको हत्या गरे। त्यस्तै सुदूरपश्चिमको एउटा बाबुले रोगका कारण छोराको हत्या गरे। त्यस्तै हेटौंडामा पनि २÷३ वर्षअघि यस्तै घटना भएको थियो।
एक वर्षअघि घटेको चर्चित निर्मला हत्या काण्डमा पनि मानसिक रोगीको संलग्नता भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म ‘युट्युब’ मा हेर्दा मानसिक रोगीले स–साना कुरा एकाएक बताएको, उसका शब्द र अनुहार हेर्दा अपराधमा संलग्न हुनसक्ने प्रमाणहरु देखिन्छन्।
त्यसैले मानसिक रोगीले अपराध नै गर्दैन भन्ने होइन। यसलाई थप अनुसन्धान गरी निर्णयमा पुग्न सकिन्छ। खसगरी औषधि प्रयोग नगर्दा यस्तो हुन जान्छ।
ख. मानसिक रोगका बिरामी अपराधपीडित हुन सक्छन्ः
मानसिक रोगका बिरामीलाई कुटपिट गर्ने, यौन शोषण गर्ने, गालीगलोज गर्ने र आफ्नै परिवारका सदस्यले घरबाट निकालिदिएर बेसहारा भएको पनि धेरै भेटिएको छ।
मानसिक रोगीले अरुले जस्तो अपराध छोप्न सक्दैनन्, धेरैले सावधानी पनि पु¥याउँदैनन्। जब रोग कडा हुन्छ ‘किन गरेको र यसको परिणाम के हुन्छ’ भन्नेसम्म जान्दैनन्। यस्तो अवस्थामा यिनीहरुलाई कारबाही नहुन पनि सक्छ। मानसिक रोगीले जब निश्चित उद्देश्य लिएर अपराध गर्छन्, त्यतिबेला कारबाहीको भागिदार हुन्छन्।